We.com.mm - သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ Date မလုပ်သင့်တဲ့ အချက် (၅) ချက်
အချစ်ဆိုတာ ချစ်တတ်ရင် ငြိမ်းချမ်းတယ်ဆိုပေမယ့် မချစ်တတ်ရင်တော့ ပူလောင်နိုင်စေမယ့် မီးတစ်မျိုးပါ…။
ဒါကြောင့်မို့လို့ သင်လည်း အချစ်ကမ္ဘာထဲကို မဝင်ရောက်ခင်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်နော့်…။
အောက်ပါအချက်တွေကတော့ သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ မကြိုက်သင့်သည့် အချက်တွေထဲက (၅) ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
1. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအတွက်ကောင်းပေမယ့် အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် အဆင်မပြေပါ။
မှန်ပါတယ်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စ နှင့် အလုပ်ကိစ္စဆိုတာ သတ်သတ်စီခွဲခြားထားခြင်းဟာ သင့်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ရုံးတွင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတခုခုကြောင့် ပြဿနာတက်ခြင်းသည် သင့်အလုပ်ကိစ္စပါ ထိခိုက်စေနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
တချို့ ကုမ္ဗဏီတွေဟာ “ရုံးအတွင်းကလူအချင်းချင်း ရည်းစားမထားရ။” စည်းကမ်း တစ်ခုအနေဖြင့် တားမြစ်ထုတ်ထားတာရှိတတ်ပါတယ်။ သင်သာ စည်းကမ်းမလိုက်နာလို့ သင့်အထက်က လူကြီးသိသွားတဲ့အခါ သင်ဟာ အလုပ်ထုတ်ခံရတတ်ပါတယ်။
3. တခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဆီက မကောင်းတဲ့သတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်။
ကောလဟာလ ဆိုတာ ဘယ်အခြေအနေ ဘယ်နေရာမဆို ရှိတတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် သင်နှင့် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကြား အဆင်မပြေမှုတွေ၊ အထင်လွဲမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် သင့်အလုပ်အကိုင် ကိစ္စအတွက်လည်း အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
4. အလုပ်အပေါ် အာရုံမရောက်။
သင်သာ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ Date လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ သေချာတာပေါ့။ သူ့ဆီမှာပဲ သင့်စိတ်အာရုံရောက်နေတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ခြင်းဟာ သင့်အလုပ်အပေါ် စိတ်အာရုံလွှမ်းမိုးခြင်း လျော့နည်းလာတတ်ပါတယ်။ ရုံးတွင်းကိစ္စမှာဆို သင်ဟာ အလုပ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးတဲ့အတွက်ကြောင့် စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာမယ်။ Pressure တွေများလာမယ်။ ဒါဟာ သင့်ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အချက်တခုပါပဲ။
5. အဆိုးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ လမ်းခွဲလိုက်ကြတာပါပဲ။
သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်တာဟာ ရုံးအတွင်းမှာတော့ အဆိုးဆုံးအချက်တွေထဲက တစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်မကြည်တာတွေဖြစ်လာမယ်။ မျက်နှာချင်းရင်မဆိုင်နိုင်တာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ အလုပ်အတွက် ထိခိုက်လာလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သင့်လုပ်ငန်းခွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာလည်း အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။
သင်သာ အချစ်ကို ကိုးကွယ်တတ်နဲ့ သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ဆက်ပါ။ သို့သော် ဖြစ်လာသမျှပြဿနာတွေကို ကောင်းကောင်းရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်လည်း အရေးကြီးပါတယ်။